Midowga Yurub Oo Ugu Yaboohay lacag Dhan 1.5 Milyan Oo Euro Cisbataalka Hargaysa | Salaan Media
Midowga Yurub Oo Ugu Yaboohay lacag Dhan 1.5 Milyan Oo Euro Cisbataalka Hargaysa
June 28,2013 Hargaysa(SM) Kulan lagu daah furayey mashruuc ay midowga Yurub ka fulinayaan Cisbitaalka Guud ee Magaalada Hargeysa oo wax lagaga qabanayo dhismaha iyo adeegyada kala duwan ee Cisbitaalka ayaa maanta laga furay magaalda Hargaysa.
Mashruucan ayaa xoojin doona horumarinta dhismooyin xaddigoodu yar yahay iyo sidoo kale fulinta nidaamka daryeel ,qalabka,daaweynta ee cisbitaalka, Mashruucu wuxuu kaloo u habaysan yahay in uu wax ka qabtaa tayada daryeelka caafimaad iyadoo loo marayo abuuridda hal-beega hab-raacyo caafimaad iyo la hagaajinta ururinta xogta caafimaad.
Agaasimaha Qorshaynta ee wasaarada caafimaadka khadar Maxamed Axmed hadal uu ka jeediyey kulankaas ayaa waxa uu uga mahad naqay ururka Midowga Yurub taakulada uu ka gaysato horumarinta adeegyada aasaasiga ah ee caafimaadka dalka . Waxaana uu xusay in mashruucani muddo soo socday wax weyna uu ka tari doono baahiyaha isbitaalka Guud ee Hargeysa.
Agaasimaha Isbitaalka Guud ee Hargeysa ayaa ka hadlay tafaasiisha mashruucan iyo meelaha wax laga qabanayo waxaanuu sheegay, In Midowga Yurub mashruucan uu ka fulinayo Isbitaalka Guud ee Hargeysa uu ku kacayo lacag dhan 1.5 Milyan oo Euro, oo wax lagaga qaanayo dhinaca Horuumarinta dhismaha Guud ee Isbitaalka.
Agaasimaha Isbitaalka Guud Dr,Axmed Xaaji Cumar,Waxa uu sheegay in mashruucan midowga Yurub uu socon doono muddo laba sanadood ah,kaasi oo kor loogu qaadayo adeega isbitaalka ee kala duwan.isaga oo tilmaamay in meelaha wax laga qabanayo ay ka mid noqon doonaan qaybaha qaliinka iyo Gurmadka Deg-dega ah.
Dr,Axmed Xaaji Cumar Askar waxa uu sheegay in mashruucan qaybtiisii hore ee xog ururintu ay bilaabantay. Waxaanuu xusay in mashruucani uu wax weyn ka bedeli doono isbitaalka Guud iyo Adeegiisaba.